Cagaf-cagaf sare-sare ayaa doorbiday! |
Mar.12th,2020, dufcaddii SD7N cagaf-cagaf-cagafeedka sare ayaa loo raray dekedda oo u diyaarsan rarida suuqa gobollada Ruushka&CIS.
Cagaf-cagafyadan dufcaddii ah waxaa soo iibiya macmiilka macdanta, si uu u qabto shaqada xariijimaha iyo ururinta alaabta daboolka ah. Waxay HBXG ka soo iibsadeen dufcaddii ugu horreysay cagaf-cagaf-kordhinta 2015. Shantii sano ee la soo dhaafay, cagaf-cagafayaashan dufcaddii ugu horreysay waxay shaqaynayeen ilaa 20,000 oo saacadood oo shaqo ah. Macaamiishu waxay la dhacsan yihiin bandhigyada wanaagsan marka la eego isku halaynta iyo waxtarka sare ee shaqada cagaf-cagafayaasha. Tan iyo markii la ballaariyay awoodda wax-soo-saarka miinada, macmiilku wuxuu sameeyay soo iibinta cagaf-cagafyada mar labaad oo leh qaab tartan. HBXG ayaa mar labaad ku guulaysatay hindisada iyadoo la raacayo xalka wanaagsan ee la soo bandhigay oo ay taageerayaan sifooyinka tayada oo ay ku qanceen barnaamijka adeegyada iibka kadib.
Waqtigan xaadirka ah, alaabta ugu muhiimsan ee SHEHW waxay dabooshaa cagaf-cagaf, tuubbada, giraangiraha, giraangiraha qodista, qodista iyo xamuulka macdanta iwm. Its alaabada cagaf-cagafeed waxay daboolaysaa 130-430 nooc cagaf-cagaf ah oo taxane ah iyo alaabooyin la fidiyay, ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa kaabayaasha, xakamaynta xaalufka, saliidda beerta iyo mashruuca dekedda, injineernimada biyaha-biyo, macdanta birta ah, deegaanka nadaafadda deegaanka, mashruuca horumarinta dhul beereedka iwm. SWMC waa soo saaraha kaliya ee gudaha haysta technology xudunta u ah cagaf sprocket sare, sida SD7N, SD8N, SD9N ah, taas oo xaqiijin karta miisaanka. wax soo saarka. Tignoolajiyada kor loo qaaday ee bulldozer-ka ayaa wakiil ka ah heerka tignoolajiyada ugu horumarsan iyo heerka ugu sarreeya ee wax soo saarka. Naqshadaynta macquulka ah iyo qaabaynta ayaa go'aamisa cagaf-cagafeedka sare ee sprocket-ka oo leh astaamo hufnaan sare leh, tayo sare leh, adkeysi sare iyo dayactir fudud.
HBXG waxay u hoggaansami doontaa falsafada sidii ay horeba u yeeli jireen, iyada oo diiradda saaraysa baahida macaamiisha, si ay u horumariso badeecadaha & cusboonaysiinta, u dhammaystirto adeegyada iibka ka dib, waxay si joogto ah kor ugu qaaddaa qanacsanaanta macaamiisha si ay u xaqiijiso korniinka wada-hawlgalayaasha!
Waqtiga boostada: Agoosto-26-2020